Ungayikhetha Kanjani Isazi Sokumaketha Nge-imeyili
NgoLwesihlanu, January 29, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UScott Hardigree
Engxenyeni yokuqala (Ungadinga Isazi Sokumaketha Nge-imeyili Uma…) sixoxe ngokuthi kungani nokuthi kungani kungaba ngumqondo omuhle ukwenza isivumelwano nabachwepheshe abanolwazi lokuzinikela nge-imeyili. Manje sizobeka imigomo eqondisayo okufanele siyicabangele ngaphambi kokuqasha i i-imeyili ejensi yezentengiso, umxhumanisi wokuthengisa we-imeyili noma umphathi wezentengiso we-in-house. Kungani?
Imvamisa izinkampani zenza ukukhetha kwazo kususelwa kunqubo engalungile, edala ubuhlungu benhliziyo, ukungasebenzi kahle, kanye nenani elikhulu lokukhiqiza kanye namadola alahlekile.
Izinto Ezinhlanu Okungafanele Uzenze
Ungakhawuleli ukusesha kwakho ngokwendawo. Yebo, indlela esiza kakhulu yokwakha ukwethembana isebudlelwaneni ubuso nobuso, kepha lokho akusho ukuthi ukwethembana akukwazi futhi ukwakhiwa ezingxenyeni ezihlukile noma kumazwekazi ngalolo daba. Hlala wazi ukuthi okufunayo kufanelekile. Ukukhawulela ukusesha kwakho zisuka nje uye endaweni echaziwe kuyimikhawulo engadingekile. Ngesabelomali sakho sokumaketha kanye ne-ROI esengozini, izigxobo ziphakeme kakhulu. Kulolu suku lwe-imeyili neWebEx, ukuxhumana kulula futhi ngokushesha. Eqinisweni, lapho sihlangana mathupha namakhasimende ethu (noma ngabe ayedinga isikhangiso noma izinsizakalo eziphethwe ngokugcwele), imihlangano ivame ukugxila futhi isebenze kahle ngoba siyihlelele kusenesikhathi futhi isikhathi sinqunyelwe.
Musa ukukhipha ochwepheshe ngokuya ngosayizi. Uma uyinkampani encane, akufanele unqande ukuthi usebenza ngokuqasha isibhamu ngoba nje banikela ngezinsizakalo eziningi futhi banolwazi oluningi kunalolo oludingayo; Impela, ungahle ungabi yisikhungo esikhulu senzuzo kubo kepha mhlawumbe banolwazi olucacile oludingayo.
Ngokufanayo, amaklayenti amakhulu akufanele akhiphe ama-ejensi amancane noma ochwepheshe abazimele ekucabangeni kwabo. Abantu abanamakhono abaphethe ezitolo ezincane bangahle babe nokuhlangenwe nakho okuningi kunomsebenzi wokumaketha we-imeyili owenziwe endaweni noma abasebenzi abasezingeni eliphakathi nendawo ozobanikezwa enkampanini enkulu yezinsizakalo ezigcwele. Ukunakwa, ubuchwepheshe, nemibono okubalulekile.
Ungenzi isipiliyoni semboni ukuthi kufanele ube naso. Ochwepheshe bezokumaketha abanolwazi oluningi lwesigaba bangahle babe ngaphansi komcabango weqembu. Alikho iqembu elilodwa noma umuntu oyoke azi okuningi njengoba wenza ngomkhakha wakho, ngakho-ke kufanele ubaqashele lokho abakwaziyo: ubuciko nesayensi yokuthengisa nge-imeyili.
Enye yezinto engizithandayo ngokuba semaketheni ye-imeyili ukuvundisa impova yemibono etholwe ngokusebenza ezimbonini ezahlukahlukene. Yonke imboni ihlukile, kepha zonke zabelana ngezimpawu ezifanayo. Imvamisa lokho esikufunda ukukhonza iklayenti embonini eyodwa kudala umqondo omusha weklayenti kwenye.
Musa ukucela (noma ukujabulisa) umsebenzi wokuqagela. Imikhankaso noma izivivinyo zokuqagela yizona ezine zebhizinisi le-ejensi, okufanayo kuyenzeka nakuma-centric email. Imikhankaso ethile ifana ne-steroids, imvamisa ibaqisa ngaphezu kwabethuli? amakhono. Kepha isizathu esikhulu sokungaceli umsebenzi we-spec ukuthi amathemba amahle kakhulu-lawo owafunayo ngempela-ngeke awenze. Akudingeki. Lapho bezimisele ngokwengeziwe ukugxumela izingwegwe zokucabangela wena, kulapho kufanele usole kakhulu. Uma bakulungele ukunikela ngomsebenzi wabo akumele kube nemakethe enhle kakhulu ngawo.
Ungagwemi imibuzo ngesabelomali sakho. Ungavumeli noma ngubani akutshele ukuthi imali (noma isabelomali) ayikhulumi. I-ejensi ngayinye noma i-outsourcer inezilinganiso ezithile zesabelomali samakhasimende, ezifinyelelwe ngokuhlangenwe nakho futhi ezichazwe ngokwengxenye umnotho nomthwalo wamakhasimende wazo wamanje. Kungakho kubalulekile, ngenxa yokwenza ukubuyekeza okunolwazi, ukuthi unombono wokuthi isabelomali sakho siyini noma kufanele sibe yini. Mhlawumbe uke waba nokuhlangenwe nakho okungathandeki ngokumemezela isabelomali sakho kusenesikhathi noma lokho obucabanga ukuthi bekuvuleke kakhulu (khumbula iwebhusayithi yokuqala oyenzile?) Kuyenzeka. Kepha njengomthetho ojwayelekile, uma ukhuluma namathemba anentshisekelo, zibandakanye ezingxoxweni ezivulekile uma kukhulunywa ngesabelomali sakho. Ekugcineni kuzokongela isikhathi, amandla, nemali.
Ngakho-ke kufanele ukhethe kanjani umlingani wokuthengisa we-imeyili?
Nquma ukuthi yini oyidingayo. Into ebi kakhulu ongayenza ukuqasha umsebenzi bese ungabavumeli bawenze. Ngabe udinga umuntu ozohola noma othile ozomlandela? Ifemu engathuthukisa isu noma uchwepheshe ekubulaweni? Umxhumanisi othanda ukuzijabulisa noma lokho konke ibhizinisi? Isisebenzi sokuthatha ama-oda noma umuntu ozophonsela inselelo ukucabanga kwakho?
Qalisa ingxoxo. Thumela ama-prospects nge-imeyili, noma ubashayele ucingo. Chithani imizuzu embalwa ocingweni nonke futhi nizothola umuzwa osheshayo wekhemistri nentshisekelo. Babuze ngomlando wabo, ukuthi amaklayenti abo amanje angobani, yini amakhono abo ayisisekelo.
Bacele ukuthi babuyekeze izifundo ezimbalwa zamacala. Hlala wazi ukuthi awubhekile ukubona ukuthi banemiphumela emihle yokubika (bonke bazokwenza) kepha ukuqonda ukuqonda okucabanga ukuthi bafike kanjani kuzisombululo zabo. Uzofunda ngenqubo yabo, ukuthi iyini, isebenza kanjani nokuthi ingafanelana kanjani nenkampani yakho namasiko akho. Ingabe kuyindlela? Kususelwa ekuphefumulelweni? Kuqhutshwa idatha?
Lapho uthola ukulingana okufanele, xoxa nabo ngendlela engcono yokuqinisekisa ubudlelwano obude nobuyimpumelelo. Vumelana ngokusobala ngokulindelwe kwakho kwesinxephezelo nezinsizakalo. Bese udubula isibhamu sokuqala futhi ubenze basebenze.
Tags: ukwakha iqembuWordPress
Abazonda Injini Yokucinga